कसरी गर्न सही संग प्राप्त यो केटी छ । मनोवैज्ञानिक सल्लाह
धेरै मानिसहरू रुचि संग प्राप्त गर्न ती बालिका जसलाई तिनीहरूले एक लामो समय को लागि कम परिस्थितिमा: मा, काम मा वा संग, उदाहरणका लागि, ती जीवित छिमेकी मा. यो विकल्प, पाठ्यक्रम, सही छ, अवस्थित, तर अक्सर वहन एक निश्चित समस्या: व्यापार छैनन्, सबै भन्दा राम्रो प्रभाव मा एक क्यारियर, र एक साथीको प्रेमिका छैन लागि एक आदर्श विकल्प भवन बलियो सम्बन्ध छ । तसर्थ, यो उपयोगी हुनेछ लागि संग एक केटी सडक मा. मनोवैज्ञानिक छन् भन्न कुनै यस्तो ठाउँमा हुनेछ जो हुन अश्लील बनाउन नयाँ परिचितों.
कुनै पनि जानकारी समावेश तत्व को खेल, त्यसैले यो हुनुपर्छ हुन्छन् अनुसार कुनै खास नियम छैन । थुप्रै जवान मानिसहरू गर्न कसरी थाहा छैन सुरु संग प्राप्त यो केटी छ । भनेर पहिलो चिन्ह संचार एक आगन्तुक संग सडक मा हुन सक्छ संग ताज पहनाया सफलता सम्पर्क ‘आँखा गर्न आँखा’, र पनि एक र मिलाउँदै अभिव्यक्ति हो । यो सुझाव छ कि केटी मन पराएको मान्छे, र त्यो ध्यान आकर्षित गर्न उहाँलाई । तर धेरै मानिसहरू यो क्षण मा गुमाएका छन् र बस पास गरेर, लागि नै अनिश्चय छ । सम्झना गर्न यस्तो मौका मूर्ख छ, उनीहरू निश्चित फाइदा लिन. भने एक मान्छे बारेमा सोच्छ जहाँ संग प्राप्त गर्न बालिका, त्यसपछि तपाईं बस गर्न घर छोड्न. जानकारी छ सडक मा नै समय मा एक कठिन र होनहार व्यापार, किनभने बालिका पाउन सकिन्छ यहाँ बिल्कुल फरक छ । को कठिनाई यस्तो संचार तथ्यलाई मा निहित छ कि यो आवश्यक छ, चाँडै काम र निर्धक्क भई बिना निराशाजनक एक सुन्दर आगन्तुक । अन्यथा, त्यो केवल दूर बारी र, उनको यात्रा जारी छ । जब बैठक एक केटी छैन मात्र सराहना व्यवहार, तर पनि को उपस्थिति मान्छे । यो छ जो उहाँले उहाँलाई पहिलो स्थानमा छ । यो महत्त्वपूर्ण छ हेर्न मात्र, तर पनि सफा सुग्घर र राम्रो. लुगा र फोहोर जूता गर्न असम्भाव्य छन् कारण को छान्नुभएको छ एक । भने एक मान्छे कसरी थाहा छैन संग प्राप्त गर्न केटी, उहाँले काम गर्न आवश्यक पहिलो वाक्यांश. यो कुनै सानो महत्त्व छ पछि, पहिलो शब्द को शुरुवात हुनेछ संचार । वा तिनीहरूले छैन भने, यो मान्छे भन्छन् केहि मूर्ख छ । सडक मा, बालिका अक्सर सोच्न आफ्नै को कुरा, महिला, त्यसैले तिनीहरू तुरुन्तै प्रतिक्रिया एउटा अपिल. पहिले सम्पर्क एक आगन्तुक, यो उचित छ कल, उनको मुस्कान र स्थापना आँखा सम्पर्क । पहिलो वाक्यांश हुनुपर्छ रूपमा प्रभावकारी रूपमा सम्भव र अनुरूप धेरै नियम: तपाईं एक केटा चाहनुहुन्छ कसरी बुझ्न सिक्न बालिका पूरा गर्न, मुख्य कुरा: तपाईं भरोसा मा, एक अवचेतन स्तर, वार्ताकार: यदि केटी पक्का छ कि संचार ल्याउन छैन उनको समस्या छ, त्यो पक्कै पनि रुचि हुनेछ, एक प्यारा र मान्छे । तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ ठाँउ बारेमा अध्ययन गर्न वा काम गर्न भनेर, वार्ताकार सिके तपाईं एक अलि बढी छ । यो यति महत्त्वपूर्ण छैन जहाँ प्राप्त गर्न, कुनै पनि मामला मा यो बनाउन आवश्यक छ त भन्ने कारण को चासो थियो, अत्यन्तै स्पष्ट छ । भने मुख्य लक्ष्य — दीर्घकालीन संचार गर्न आवश्यक छैन, सोध्न यो केटी को लागि एक चुरोट वा के सोध्न समय छ । आदर्श — जब केटी सुरुमा राम्रो- र प्रतिक्रिया राम्रो मजाक छ । यसको मतलब यो हो कि त्यो मन पराएको मानिस, र त्यो खुसीसाथ. तर आनन्द गर्न यो सफलता, तपाईं कसरी जान्नु आवश्यक ठीक प्राप्त गर्न केटी थाहा र निरन्तर आफैलाई मा काम. अक्सर, यो मान्छे हराएका छन् जहाँ एक अवस्था केटी समर्थन संचार, तर त्यहाँ कुनै देखिने संकेत उदीयमान सहानुभूति । भने एक आगन्तुक देखाउन छैन भावना, तपाईं प्रयास गर्न आवश्यक चासो छ उनको । विश्वस्त महसुस गर्न, मात्र प्राप्त गर्न कसरी थाहा केटी सही, तर पनि के गर्न विफलता को मामला मा. त्यहाँ छ भने, अझै पनि कुनै सकारात्मक परिणाम छ, र केटी जारी कुराकानी गर्न ‘मा मिसिन’ राम्रो छ, यो अन्त गर्न, कुराकानी बताइरहेका रोजगार वा जरुरी कुरा, र सोध्न आगन्तुक लागि फोन नम्बर । बरु, यो गर्नुपर्छ छैन प्रश्न, तर एक दाबी छ । एक जवान मानिस विख्यात गर्नुपर्छ भनेर उहाँले खुसीसाथ आफ्नो जारी जानकारी मा एक कप कफी । शायद अर्को समय, यो केटी एक राम्रो मुड, र त्यो जवाफ हुनेछ केटा. अब जवान मान्छे को एक धेरै खर्च समय मा इन्टरनेट र विभिन्न सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न । यस दिइएको वास्तवमा, यो मान्छे भूल हुँदैन कि त्यहाँ छ, पनि. तर यदि जवान मानिसहरू लाग्छ कि यो पर्याप्त छ एक सन्देश पठाउन, र केटी तुरुन्तै जारी गर्न कुराकानी, त्यसपछि तिनीहरूले धेरै गलत । को प्रविधी संग रही ‘कुलपति’ एकदम जटिल छ किनभने, तपाईं आवश्यकता ध्यान आकर्षित गर्न र देखि बाहिर खडा सयौं अन्य खाता. भएको एक राम्रो फोटो महत्त्वपूर्ण छ । छैन हरेक केटी गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ जवाफ भने त्यो छैन बारे एक विचार को मालिक. के छैन धारण अवतार चित्रहरु को चलचित्र नायक, वा फोटो को जनावरहरू, यो दृष्टिकोण ल्याउन छैन सफलता । केटी छैन आवाज सुन्न, महसुस गर्दैन आभा, त्यसैले पहिलो छाप त्यो बनाउन हुनेछ द्वारा फोटो । खण्ड ‘बारे म’ भरिएको हुनुपर्छ विस्तार र रोचक, नीरस लाइनहरु आकर्षित छैन ध्यान । तपाईं निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ उज्ज्वल कि क्षण मा देखापर्यो जीवन वर्णन, सोख र सोख छ । बारे मा भूल छैन, यो हास्य को अर्थमा, तर पनि धेरै जान पनि टाढा छैन, प्रभावित. भने प्रश्नावली संकलित छ र यो फोटो छानिएको छ, त्यसपछि तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् व्यापार तल छ । पहिलो सबै को, यो आवश्यक छ पृष्ठ चयन गर्न जसले केटी को एक हुनेछ ‘पीडित’. पहिलो पत्र लेखिएको हुनुपर्छ यस्तो एक तरिका रूपमा लोभ्याउन गर्न र चासो कारण, एक इच्छा जारी गर्न संचार. भने, पढ्दै गर्दा सन्देश, त्यो — सफलता लगभग हासिल गरेको छ । यस्तो वाक्यांश रूपमा ‘नमस्कार, के तपाईं गरिरहेका छन्. र ‘नमस्कार, तपाईं कसरी हो । तुरुन्तै हुनुपर्छ हटाइएको शस्त्रागार हेर्नुहोस्. अधिकतम कि तिनीहरूले गर्न सक्छन्, ल्याउन छ एक जवाफ, जो देखि यो धेरै कठिन हुनेछ विकास गर्न रोचक र सक्रिय संचार छ । सन्देश मिलेर गर्नुपर्छ को धेरै प्रस्ताव छ । भने एक मान्छे छ समस्या संग व्याकरण, यो लायक छ, कम से कम पहिलो पटक ध्यान दिएर चेक सबै छ, त्यसैले त्यो कुनै गल्ती छन् । बालिका मात्र हो हाँस्न, तर पनि कष्टप्रद छ, र विकर्षक छ । बुझ्न के यो राम्रो लेख्न, यो लायक छ अध्ययन गर्न पेज को छान्नुभएको एक पढ्न, यसको प्रोफाइल र स्थितियां.
अक्सर, तिनीहरूले बताउन सक्नुहुन्छ बारेमा धेरै विचार, भाव र भावना को केटी
भने प्रश्नावली सूची आफ्नो मनपर्ने चलचित्रहरूको, तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ यो जस्तै केहि: ‘नमस्कार, फोहर छ । को लागि खोज मा संचार, म गए यो साइट फेला र. म साँच्चै प्रेम गर्न जा सिनेमा, म आमन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं यस्तो र यस्तो एक फिलिम छ, र त तपाईं पिउन सक्छन् केही स्वादिष्ट चिया मा एक क्याफे छ । पाठ, को पाठ्यक्रम, मा निर्भर भिन्न हुनेछ केटी गरेको सोख छ । शब्दहरू संग फोटो भनेर कथा देखिन्छ विश्वास गर्न सकिने छ । त्यसपछि केटी हुनेछ जानुहोस् पृष्ठ र देख्न विश्वस्त मान्छे, मित्र संग मजा र आनन्दित जीवन छ । लागि यो असामान्य छैन, जवान मानिसहरू बारी गर्न मनोवैज्ञानिक संग प्रश्न: ‘म छु डर संग प्राप्त गर्न बालिका, म के गर्नुपर्छ. भने स्वभावैले यो उपहार अवस्थित छैन, त्यसपछि तपाईं हुनेछ निरन्तर. मा पहिलो, कपास खुट्टा, वृद्धि पसिना आइरहेको र गर्नेछ मान्छे पूरा, तर समय मा तपाईं सिक्न सक्छौं नियन्त्रण गर्न यी प्रक्रियाहरु र आतंक । कुनै पनि विजयी आफ्नै डर र कमजोरी छ एक कदम स्वतन्त्रता र आत्म-विश्वस्त छ । कसरी बुझ्न सिक्न संग प्राप्त गर्न बालिका सुरु, सबै भन्दा राम्रो संग आफैलाई । दैनिक प्रशिक्षण र संचार संग विभिन्न बालिका बाटो हो सफलता । हुन संचार मा विपरीत सेक्स संग, तपाईं गर्न आवश्यक छ पाउन एक प्रेरक औचित्य. यो आवश्यक छैन इश्कबाज गर्न हरेक संग परिचित र अपरिचित जवान महिला, तपाईं बस एक अनुकूल कुराकानी.
यस्तो संचार पनि दिन साहस र भरोसा मा आफ्नो क्षमता
छ भने व्यावहारिक कुनै ज्ञान कसरी सिक्न मान्छे संग केटीहरूलाई, तपाईं उपयोग गर्न सक्छन् रणनीति को सक्रिय सुनेर.
यो सोध्न आवश्यक छ अधिक यस्ता प्रश्नहरू, जो केटी खुसी हुनेछ जवाफ ।
सिक्न डेटिङ पोर्चुगल मा. एक महिला को लागि देख एक मानिस द्वारा लिङ्ग →